မြိတ်ကော်ပြန့်စိမ်း စားကြပါဦး… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Food, Drink & Recipes » မြိတ်ကော်ပြန့်စိမ်း စားကြပါဦး…	9
Posted by Yae Myae Tha Ninn on Oct 19, 2015 in Food, Drink & Recipes |9comments
– မေ့သွားမှာစိုးလို့ ပြန်လာပြီး မိတ်ဆက်တာ… ရေမြေ့သနင်းပါ… ဖွဘွတ်မှာ ကိုထွဋ်… လမ်းတွေ့ရင် နှုတ်ဆက်ပါနော်…
– ဒါလေးက အဘွား အမွေ မြိတ်ကော်ပြန့်စိမ်းပါ… မြိတ်မှာ ဒေါ်ခင်နုဆိုပြီး ရောင်းပါတယ်…
– လုပ်တတ်လားဆို နိုးပါ… အဒေါ် အဖေ့ ညီမ လာတုန်းက လုပ်စားထားတာပါ…
– မုန့်သား လိပ်တဲ့ အရွက် ကိုယ်တိုင်လုပ်တာပါ… နူးညံ့ပါတယ်… ပါးစပ်ထဲ ထည့် သွားလေးနဲ့ ကိုက်တောင် မကိုက်ရပါဘူး.. တင်ရုံနဲ့ ပြတ်ပါတယ်…
– အစာကတော့ စိမ်းစားဥကို မုန်လာဥတွေ ဂေါ်ဖီတွေ နေရာမှာ သုံးပါတယ်… အချိုပိုလေးအောင်ပါ…
-နောက်တခုက အချဉ်ရည် ၂ မျိုးပါ.. အချို နဲ့ အစပ် (၂ ခုလုံး ထည့်ရပါတယ်… )
-အချိုက ကြက်သွန်ဖြူ နဲ့ လုပ်ပြီး၊ အစပ်က ငရုတ်သီးခြောက်ကို ရေဆေးထောင်းပြီး ပအုန်းရည်နဲ့ လုပ်ပါတယ်…
-အရင်ဆုံး ဆလပ်ခင်းပါတယ်… အချဉ်ရည် ၂ မျိုးလုံး ထည့်ပါတယ်… စိမ်းစားဥကြော် ထည့်ပါတယ်..
-အပေါ်က ဘိုစားပဲ၊ ဘဲဥအချပ်လိုက်ကြော် သေးသေးလေးတွေ ညှပ်ထားတာ ဖြူးပါတယ်… ပဲပင်ပေါက် ရေနွေးဖျော် ထည့်…
-နံနံပင်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက်၊ ကြက်သား သို့မဟုတ် ဂဏန်း (၂ မျိုးလုံးထည့်လဲ ရ…)
-ပြီးရင် လိပ်ပြီး ကတ်ကြေးလေးနဲ့ ဖြတ်ပြီး စားရုံပါ… အချဉ်ကြိုက်သေးရင် အပေါ်က အချို သို့မဟုတ် အစပ် နှစ်သက်ရာ ထပ်ဆမ်းပြီး စားလို့ရပါတယ်..
-အောက်က ဌက်ပျောရွက်ခံရင် ပိုကောင်းပါတယ်…
တောင်ပေါ်သား says: ကော်ပြန့်စိမ်းက ပေါက်ဆီလိုပေါင်းထားရတဲ့ ကော်ပြန့်စိမ်းမျိုး အရမ်းကြိုက်
အနော်ရထာလမ်းပေါ်က ရွှေဖလားလဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ခဏ ခဏစားဘူးတယ်
အခုတော့ အဲဒီဆိုင်နေရာဖျက်လိုက်ပြီး တိုက်သစ်ကြီးဆောက်နေလေရဲ့
Yae Myae Tha Ninn says: ဦးမျိုးပြောတဲ့ ကော်ပြန့်စိမ်းက ကြေးအိုးအဖတ် နဲ့ လုပ်တာ .. အခုက ပါးပါးလေးခင်ဗျ့… မတူဘူး… မြိတ်ကော်ပြန့်ဆိုတောင် အစာတူမယ်… အဖတ်လုပ်တာကျတော့ ကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြတာများတယ်.. အလွယ်ဝယ်တတ်ကြတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: စားချင်စရာလေးအေ။
စားကြည့်ဖူးမှ ကော်ပြန့်စိမ်းကို အကြော်ထက် ကြိုက်တယ်။
Yae Myae Tha Ninn says: အဲဒီ ကော်ပြန့်က ကြော်လဲ ရတယ်… အချဉ်မထည့်ဘဲ ကြော်.. ပြီးမှ အချဉ်ဆမ်းစား ရတယ်… ဒါပေမဲ့ အစိမ်းက ပိုကောင်းပါတယ်… နေလဲ ကောင်းပါတယ် ခင်ဗျာ.. ကျေးဇူးပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinsett @ Maung Thura says: .မြိတ် ကတ်ကြေးကိုက်တော့ အတော့်အတော်ကို ကြိုက်မိ… စားမိ..
Yae Myae Tha Ninn says: စားချင်တရက် အိမ်ကို စုလာလေ… ကြော်ကျွေးမယ်… တကယ် ပြောတာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -အရွက်က ဘယ်မှာဝယ်ရတာတုန်း ???
Yae Myae Tha Ninn says: ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်တာပါ ခင်ဗျာ… အဒေါ် လုပ်တာ ပြောပါတယ်…
Ma Ma says: ကော်ပြန့်စိမ်းကြိုက်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.